Warka 11 02 2017 Madaxweynihii hore Xasan Sh. oo kulan saxaafada loo diiday la qaatay M. Farmaajo. - Saafi Films Production Somali Films Hindi Af Soomaali Musalsal heeso
Doorashada Soomaaliya MuuqaaloLatest news updateWarkii Universal Tv
Warka 11 02 2017 Madaxweynihii hore Xasan Sh. oo kulan saxaafada loo diiday la qaatay M. Farmaajo.
Warka 10 02 2017 Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay musharaxiintii la tartamayay.
Faaliyaha 11 02 2017 Shacabka & ciidamada Soomaaliya oo is dhaxgalay.
World News 23 12 2015 Dowlada oo mamnuucday in ciida masiiixiga lagu qabto…
Warka 20 03 2017 Madaxweyne Farmaajo oo safarkiisa ugu horeeyay ku tagaya..
WARKA 07 01 2019 Xildhibaanada cusub ee Puntland oo khudbadaha ka dhageystay musharaxiinta
Warka 14 12 2016 Gudiga xalinta qilaafaadka doorashooyinka oo soo celiyay 11 xildhibaan.
Wasaarada haweenka & xuquuqul insaanka oo daahfurtay hindise sharciyeedka xaquuqda caruurta